Newsletter n° 49 (Dikanteny Malagasy) -
Accueil > Newsletter > Newsletter n° 49 (Dikanteny Malagasy)
Ny FILATEX dia orinasan’ny mpandraharaha anisan’ny manan-karena indrindra eto Madagasikara, izay efa noresahana matetika tamin’ny taona 2014 nohon’ny fandroahana tamin’ny fomba henjana fianakaviana 50 tao Antananarivo (1). Nisy fianankaviana nitsangana nanohitra izany saingy tsy naharitra ela, toy ny vilany tany niady tamin’ny vilany vy.
Ny zava-misy manokana ao Antsiranana dia mikasika tany 04 hekitara 66 a 50 ca izay namidin’ny SEIMAD tamin’ny orinasa FILATEX teo aloha. Mitondra ny laharana faha-14500 BK ny titra fananan-tanin’ilay faritra mitondra ny anarana hoe « Jardin de Filatex » na Zaridainan’ny Filatex.
Ny famakafakana antsimpiriany notanterahan’ny Sehatra Iombonana hoan’ny Fananan-tany (SIF) dia mampiseho fa ny ankabeazan’ny fianankaviana voakasika dia efa nipetraka tamin’io tany io mihoatry ny 10 ka hatramin’ny 15 taona ary efa nanamboatra trano izay matetika natao tamin’ny fanitso. Ny asan’ireo filoham-pianankaviana ao dia mpampianatra, mpanao trano, mpamily fiarakodia, teknisiana amin’ny fambolena, mpandrafitra, mpanao varotra madinika, … ka na kely aza ny fidiram-bolan’izy ireo dia nampiasa vola betsaka izy nandritr’ireo taona ireo nanatsarana ny trano fonenany sy ny kalitaon’ny fiainan’ny zanany. Manana herin’aratra tafiditra ao an-trano ny sasany amin-dry zareo.
Dia ho roahina hipetraka any ankalamanjana ho lasa tsy manan-kialofana ve ireo fianankaviana ireo ka ho very avokoa ny vokatry ny hatsembohana sy ny ezaka nataony nandritr’izay taona rehetra izay ?
Noho ny fahasahiranana atrehin’ny fianankaviana malagasy kely fidiram-bola manoloana ny fividianana tany sy fahazoana titra fananan-tany, dia ohatra iray vaovao indray ity tranga ao Antsiranana ity mampiseho ny fahasarotan’ny fizakan-tany sy ny fisian’ny tsy rariny nanjaka tao amin’ny sehatry ny fananan-tany nandritry ny fitondrana nifanesy fa miha-mavaivay amin’izao fotoana izao eran’ny firenena.
Ny lahatsoratra nivoaka an-gazety vao tsy ela dia nanambara fa ny tompon’ny orinasa FILATEX dia anisan’ny solontena ambonin’ny firenena Pakistan eto Madagasikara (Consul honoraire). Noho izany dia manana karazan’ny zo miaro azy tsy ho azo saziana hono izy (immunité) raha misy hanakianana na hanenjehana azy amin’ny fanapaha-kevitra raisiny eto amin’ny nosy. Milaza ilay gazety fa ny Minisi-panjakana misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny Fanajariana ny Tany sy ny Fampitaovana mihitsy no nanamarina tao amin’ny fampielezam-peo fa nividy tany be dia be eto Madagasikara ny tompon’io orinasa io. Voalaza koa fa nandritry ny volana faramparany teo dia nanomboka nisesisesy ny fandroahana fianankaviana nipetraka tamin’ny tany izay ananan’ny orinasa FILATEX titra tao an-drenivohitra sy ny manodidina (2). Manomboka miseho any amin’ny tanàna hafa izany izao ny olana.
Tonga ny fotoana tokony hakan’ny manam-pahefana andraikitra sy ahitany vahaolana momba izao fisehoan-javatra mihanaka manerana ny firenena izao. Anjaran’ny manam-pahefana ny mitondra vahaolana azo ekena sy sahaza mba tsy ahatonga ireo fianankaviana malagasy honina any ankalamanjana sy ho very fananana.
Ny fananana taratasy titra fananan-tany dia tsy tokony hanome zo sy alàlana tsy hiraharaha izay hanjo an’ireo izay tsy manana izany. Amin’ity tranga iray ity, tsy fantatra ny fomba sy zotra nividianan’ny orinasa FILATEX ny tany avy amin’ny S.E.I.Mad izay orinasa ananan’ny fanjakàna malagasy anjara (« société d’économie mixte » nanjary « société anonyme à participation publique »). Dia tena tsy tafiditra anatin’ny fiahian’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Fanjakàna mihitsy ve ny manjo ny mponina malagasy sahirana maro an’isa fa ny tombotsoa manokana sy ny tombotsoan’ny vahiny foana no manan-danja aminy ?
Miangavy ny manam-pahefana any amin’ny ambaratonga nasionaly sy ny mpiandraikitra ao amin’ny faritra Diana izahay mba hitady ka hahita vahaolana ara-drariny sy mitsimbina ny maha-olona ary handray ny fepetra izay ilaina mba tsy hahavoaraoka ireo fianankaviana monina ao amin’ny sombin-tany antsoina hoe Jardin de Filatex (Zaridainan’ny Filatex) .
Amin’izao vanim-potoana izao, tena zava-dehibe ny tsy fanampiana trotraka ny fahorian’ny mponina : raha roahana avy ao amin’ny toeram-ponenany ireo fianankaviana efa manana fidiram-bola kely amin’ny fomba maharitra ireo dia hampahantra tanteraka azy indray izany ka hampitombo ny isan’ny tsy manan-kialofana sy ny tsy manana. Ny tompon’ny titra anefa afaka mahita làlana hafa hanatanterahana ny tetikasany.
Manao antso avo amin’ny mpitondra malagasy izahay mba hiroso amin’izay amin’ny asa fitandrovana ny fanajàna ny zo fototry ny olom-pirenena malagasy tsy dia manan-karena, mahantra sy tena mahantra be any amin’ny faritra rehetra eto Madagasikara mba hananany tany hivelomana, toeram-ponenana sahaza ary tafo hampialofany ny fianankaviany, ary hampijanona ny fanampiana hatrany ny efa manan-karena hampitombo ny harenany.
23 desambra 2015
Sehatra Iombonana ho an’ny Fananantany (SIF) – www.sif-mada.mg
Newsletter n° 27 par Admin (41 %)